Supreme Court Yotarisirwa Kupa Mutongo paMakurukota Anonzi Haafanirwe Kunge Akagadzwa
Dare repamusorosoro re Supreme Court ranzwa nyaya yakaunzwa kudare iri nemukuru wesangano rinoshanda rakazvimirira richirwira hutongi hwejekerere, re Voice of Democracy Trust, vachida kuti makurukota ehurumende gumi adzingwe sezvo vachiti akagadzwa zvisiri pamutemo, rikati richatura mutongo waro munguva inotevera.
Mukuru we Voice of Democracy Trust, VaMoven Kufa, vakaendesa nyaya iyi kudare repamusorosoro mushure mekunge mukuru wevatongi vedare repamusoro, Va George Chiweshe, vatura mutongo gore rapera wekuti makurukota ehurumende akawandisa kudarika akatarwa nebumbiro remitemo yenyika.
Asi vakarasa nyaya iyi vachiti zvinogona kukanganisa mashandiro ehurumende yemubatanidzwa kana makurukota gumi aya akabviswa.
Gweta raVa Kufa, Advocate David Ochiieng, vaudza vatongi vedare repamusorosoro vanoti mukuru-mukuru wevatongi munyika, Va Godfrey Chidyausiku, Va Yunus Omerjee, Amai Annie-Marie Gowora, Amai Vernanda Ziyambi pamwe naVa Paddington Garwe, kuti dare repamusoro rakakanganisa parakarasa nyaya iyi.
Asi gweta riri kumirira mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, pamwe nemakurukota ari kunzi abviswe aya, Advocate Lewis Uriri, vatsika madziro vachiti VaKufa havafanire kuteererwa sezvo vasingakodzere kuisa chikumbiro chakadai kudare.
Asi Va Ochieng vati chero chipi chizvarwa che Zimbabwe chine mvumo nekodzero dzekuona kuti bumbiro remitemo yenyika ratevedzerwa.
Va Uriri vati kushandiswa kwezwi rechirungu rinoti “shall” mubumbiro remitemo hakukumikidze mutungamiri wenyika kuti vagadze makurukota asingadarike makumi matatu nerimwe muhurumende.
Va Uriri vati nyaya iyi inofanirwa kuraswa zvakare nepamusana pekuti Zanu PF nemapoka maviri eMDC havana kuziviswa nezvenyaya iyi sezvo vane chekuita nekugadzwa kwemakurukota ehurumende.
VaChidyausiku vati vachazotura mutongo panyaya iyi muzuva rarisina kutara.
Kana chikumbiro chaVa Kufa chikatambirwa nedare, makurukota ehurumende gumi anosanganisira Va Henry Madzorera vezvehutano, Va Saviour Kasukuwere vanowona nezvevechidiki, Va Walter Mzembi, gurukota rezvekushanyirwa kwenyika, gurukota rezvekupodzwa kwemaronda, Amai Sekai Holland, gurukota rezvekuvakwa kwedzimba, Va Giles Mutsekwa, gurukota rinoshanda riri muhofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Joice Mujuru, Va Sylvester Nguni, gurukota rezvekurima, Va Joseph Made, pamwe na Amai Flora Bhuka, gurukota rinoona nezveminda vachishanda vari muhofisi yemutevedzeri wemutungamiri wenyika, Va John Nkomo, vanogona kurasikirwa nemabasa nepamusana pekuti vakatora mhiko mushure memakurukota makumi matatu nerimwe akatarwa nebumbiro remitemo yenyika.
Chikamu chechimakumi maviri chebandiko rechitanhatu rebumbiro remitemo yenyika chinoti panofanira kuve namakurukota ehurumende makumi matatu nerimwe chete. Chikamu ichi chinoti Zanu PF inofanira kudoma makurukota gumi nemashanu, MDC-T yodoma gumi nevatatu uye MDC diki yodomawo matatu.
Asi mapato matatu ari muhurumende akabvumirana kuwedzera makurukota zvisiri pamutemo, inova nyaya yakaiswa mudare iri naVa Kufa.